Turkiga iyo Qadar oo kaalmo lacag ah ugu deeqay Yemen. – STAR FM SOMALIA
Hey’adda Bisha Cas ee dalka Turkiga iyo Ururka Kaalmada dalka Qadar,ayaa lacag samofal ah oo gaareysa hal milyan oo doolar ugu deeqay dadka reer Yemen ee ay dhibaatooyinka ka soo gaareen dagaalada sokeeye ee ka socda dalkaasi.
Deeqdaan lacagta ah,ayaa daba socota xaflad ka dhacday xarunta Bisha Cas ee magaalada Istanbul ,halkaasi oo ay heshiis wada shaqeyn ah oo wax loogu qabanaayo dadka reer Yemen ay ku saxiixeen madaxda Ururka kaalmada dalka Qadar iyo kan BIsha Cas ee Turkga Faisal Rashid Al Fehaida iyo Kerem Kinik .
Dhinacyadaasi taageeraya dadka Yemen ayaa wada qorshee laba qeybood ah oo la doonayo in marka hore cunto iyo daawo loo diro dalkaasi,iyadoo kan labaad uu yahay sidii qalab caafimaad loo geyn lahaa cisbitaalada .
Sida laga soo xigtay Hey’adda Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in 22-,ilyan oo dad ah ay u baahan yihiin kaalmooyin bini’aadanimo.
TABINTA IYO SOOSAARIDDA BARNAMIJKA (QOOR )
FARSAMADDA (Mowliid Axmed Nuur ).